Intle kwaye iToyile ngasemva kwendlu INDLU ENCINANE kufutshane neDolophu - I-Airbnb
Intle kwaye iToyile ngasemva kwendlu INDLU ENCINANE kufutshane neDolophu
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguPatrick
** Ubuyile kwaye ungcono kunangaphambili! Emva kokuvala unyaka wokulungiswa kunye notyando olukhulu lwe-2 ndiyavuya ukuthi ndibuyile. Uxolo oluninzi kuye nabani na endiye ndarhoxisa okanye ndala ngenxa yezo zizathu **
Uzibonile kumabonakude... nali ithuba lakho lokuchitha ubusuku kwindlu encinci yokwenyani! Yonwabela ibhedi yokumkanikazi etyebileyo, igumbi lokuhlambela eligcweleyo elinebhafu, kwaye upheke ukutya okulula ekhitshini elilingana nepinki. Izilwanyana zasekhaya zamkelekile kule ndawo incinci, kwaye ikhaya livuleleka kwiyadi ebiyelwe ngokupheleleyo ukuze zibaleke kwaye zidlale.
Isenokuba ncinane, kodwa ikhabhathi encinci iza ixhotyiswe ngayo yonke into esithemba ukuba uyakuyidinga ngexesha lokuhlala kwakho, nokuba lusuku olunye okanye iveki yonke. Uyakonwabela ukulala okuphumla kwibhedi yokwenyani, elingana nokumkanikazi. Kukho itafile ye-bistro apho unokutshisa ilaptop yakho, ufunde incwadi, okanye usele ikomityi yekofu. Akukho shawari apha - igumbi lokuhlambela linebhafu egcweleyo. Ikhitshi lixhotyiswe nge-cooktop yombane, ifriji encinci, isinki, itoaster, umenzi wekofu, kunye nesitya kunye nempahla. Hlala ukhululekile ngobushushu obuzinikeleyo kunye neyunithi ye-AC enokuthi imiselwe ngokuthanda kwakho.
Kukho indawo eninzi yokudlala ngaphandle, nayo! Indlu encinci ibekwe ngasemva kwendawo yokuhlala ezolileyo kwaye ivuleleka kwiyadi ebiyelwe ngokupheleleyo. Kukho ivaranda encinci, egqunyiweyo ngaphambili yokuhlala xa amaqondo obushushu elungile, kwaye kukho nebala lebhaskithili elingasemva!
4.82 · Izimvo eziyi-525
Ifumaneka malunga nemizuzu eli-10 ukusuka edolophini eDurham, kwiKhampasi kaDuke, kunye neSibhedlele saseDuke uya kukuthanda ukuhlola esi sixeko sisemazantsi. Isampulu yeendawo zethu zokutyela eziphumelele amabhaso kunye neendawo ezithengisa utywala, thatha umdlalo we-baseball ye-Durham Bulls, okanye uhambe kwiindledlana zeentyatyambo ze-Duke Gardens. Indlu encinci ibekwe emantla esixeko kwindawo yokuhlala ezolileyo, imizuzu nje eli-10 ukusuka eDuke/edolophini kunye nemizuzu engama-25 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseRDU/Chapel Hill. Sibekwe ekupheleni kwendlela emfutshane ye-de-sac enendawo yokupaka eninzi kunye ne-zero traffic. Kukho iivenkile ezimbini zeStarbucks ezingaphantsi kwemizuzu emihlanu yokuqhuba, kunye negesi/igrosari/njl.
Uzalelwe kwaye wakhulela eDurham, ndiyakuthanda ukuthetha ngesixeko sam kunye namatye anqabileyo afihliweyo. Ndizama ukufumaneka ngemibuzo kunye noncedo xa lufuneka, kodwa kungenjalo vumela iindwendwe zibe nendawo eninzi yabucala.